FA လေးတွေ Valentine’s Day ကိုဘယ်လို ကုန်ဆုံးသင့်လဲ? - Chelmo News Portal
Home›Knowledge›FA လေးတွေ Valentine’s Day ကိုဘယ်လို ကုန်ဆုံးသင့်လဲ?
Single ဖြစ်နေလို့ Valentine’s Day ဆိုတာ အပိုဘဲ ဆိုတဲ့ အမြင်တွေကို ဖယ်သင့်နေပါပြီနော်။ ကိုယ်ကSingle ဖြစ်လေ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေကို ပိုပြီး အကျိုးရှိအောင် အသုံးချနိုင်လေဘဲလေ။ ဒီအချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုချစ်ပေးပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပေးပါ။ အဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ သင့်အတွက် သင့်တော်တဲ့ လူတစ်ယောက်က သင့်ဆီရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုလူ မရောက်လာခင် Single Life နဲ့ V-day ကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းရမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) သူငယ်ချင်းတွေကို ခေါ်ထုတ်ပါ
Valentine’s Day က Romantic ဆန်မဲ့ ချစ်သူတွေအတွက်ဘဲ မဟုတ်ပါဘူး Romantic မဆန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်နော်။ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းအတွက် Postcard ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် V-day ကို သူတို့နဲ့ အတူကုန်ဆုံးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ Valentine’s Day ကို ပျော်ရွှင်စွာ ကုန်ဆုံးလိုက်ပါ။
(၂) ပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Relationship တွေကို ပြန်သုံးသပ်ပါ
ဒီလိုရက်မျိုးဆို တစ်ခါတစ်လေ အရင်ကအကြောင်းတွေကို စဉ်းစားမိတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုအခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်မတင်မိပါစေနဲ့ ဒီလိုလက်လွှတ်ခဲ့ရလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့တာမဟုတ်လား။ မပျော်ရွှင်တဲ့ Relationship တစ်ခုကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်သတ္တိကို အရင်ဆုံး ချီးကျူးလိုက်ပါ။ Relationship တိုင်းကနေ သင့်ကို ပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) V-Day ကို ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးပါ
ဒီလို ရက်မျိုးမှာ မိသားစုနဲ့ ဖြတ်သန်းတာကလည်း သင့်အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်လေးတွေကို ရနိုင်မှာပါ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေ နဲ့ V-Day မှ မဟုတ်ပါဘူး နေ့ရက်တိုင်းကို အတူရှိနေပေးသင့်ပါတယ်။
အထီးကျန်တဲ့ အခါမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်မကြည်တဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာပဲ ဖြစ်စေ အလှမပြင်ချင်ပဲ ဖြစ်သလို အပြင်ထွက်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တော့ အဲ့လို အချိန်မျိုးဆို ကိုယ့်စိတ်ကို ပိုကြည်အောင် လှလှလေးပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလို V-Day မျိုးမှာဆို ကိုယ့်ရှေ့မှာ Ro နေတဲ့ အတွဲတွေ မြင်ပြီး အလိုလို အာရုံနောက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လို အချိန်မျိုးဆို Single ဖြစ်နေလို့ Ro စရာမရှိပေမဲ့ တခြားနေ့တွေထက် ပိုလှအောင်ပြင်ဆင်ပြီး ရည်းစားမရှိလည်း လှကြောင်း နေပြလိုက်ပါ။ အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ့်ကို ကြိုက်တဲ့လူတွေတောင် ပိုများလာပါလိမ့်မယ်။
(၅) ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ပါ
V-Day ဆိုတာလည်း နေ့တွေထဲက တစ်နေ့ပဲ မလား။ ဒီလိုရက်က ဘာမှလည်း ထူးခြားနေတာမဟုတ်လို့ ကိုယ်လုပ်နေကြ အရာတွေပဲ ဆက်လုပ်ရုံပဲလေ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေ Single တွေက ပိုပြီးတော့တောင် အချိန်ပိုရနေတာဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေကို အလကားမဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ပစ်ပါ။ V-Day ဆိုတာလည်း ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ရက်တွေထဲက တစ်ရက်ဆိုတော့ ကိုယ့်နေ့ပဲလေ။ ကိုယ့်နေ့မှာ ကိုယ်စားချင်တာ စားလိုက်ပါ။ ဝယ်မယ်လုပ်ထားပြီး မဝယ်ဖြစ်တာတွေရှိရင်လည်း ဝယ်လိုက်ပါ။
(၆) ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံးဆက်ဆံပါ
ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့သူ ရောက်လာရင်တော့ လိုချင်တာရှိရင် ဖြည့်စည်းပေးမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ အဲ့လို ဖြည့်စည်းပေးတာကို စောင့်မနေဘဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ်လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်စည်းပါ။ ခရီးထွက်တာမျိုး ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လိုချင်တာကို ဝယ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို Special အနေနဲ့ ဖြည့်စည်းလိုက်ပါ။
(၇) အမည်မဖော်ပဲ လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးပါ
V-Day ဆိုတာ ချစ်သူရှိမှ လက်ဆောင်ပေးရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ချောကလက် ဒါမှမဟုတ် အမှတ်တရ ဖြစ်စေမယ့် လက်ဆောင်လေးတွေပေးပါ။ တခါတည်း ဒီလိုရက်မျိုးမှာ ကိုယ့်Crushလေးကိုလည်း လက်ဆောင် ပေးလို့ရပါတယ်နော်။